Haala Baqattootni Saud Arabiyaa keessa jiran akkan yaaddessaadha jedhan ilmaan Oromoo hidhamanii dararamaa jiran – Ayyaantuu
[ September 16, 2021 ] Hirnooyyeen Kaate! Qeerroo Yaamichi Dhiyaate. Waraana Finfinneef Leenjisaa Jirra. Taaboot Booji’ame	Afaan Oromoo
HomeAfaan OromooHaala Baqattootni Saud Arabiyaa keessa jiran akkan yaaddessaadha jedhan ilmaan Oromoo hidhamanii dararamaa jiran
Haala Baqattootni Saud Arabiyaa keessa jiran akkan yaaddessaadha jedhan ilmaan Oromoo hidhamanii dararamaa jiran.
Lammiileen Itiyoophiyaa hedduun hiyyumaa fi roorroo daangaa darbe baqatanii kan biyya abbaa isaanii lakkisanii biyya Ormaatti baqatan Ilmaan Oromoo hedduun kan ba’aan gabruummaa biyyaa ormaatti isaan godaansiftee baqatani biyyaa Saud-arabia jiratan haala hamaa keessaa jiru.
Baatii jahaa oliif manneen hidhaa Saud Arabiyaa keessatti hidhamanii kan dararamaa jiran dargaggootni hedduun haalli isaan keessa jiran akkaan yaaddessaa tahuu irraa kan ka’e huccuu jijjiirratan dhabanii dhibee adda addaaf saaxilamaa hanga Lifaafa ykn pestal ofitti maranii uffatanii salaatan irra gahanii jiraachuu suuraaleen miidiyaa hawaasaarra naannahu ni mul’isa.
Yeroo ammaa kana torban dabarsine keessa Sabaaba hin beekamneen baqatan biyyaa itiyoophiyaa tokko poolisii biyyaatti irratti erga ajjeechaa raawwateen booda Lammiileen Itiyoophiyaa baqatanii Saud Arabiyaa keessa jiran haalaan rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuun dhagahame.
Yeroo ammaa kanas dargaggoonni hedduun bakka hojii idilee qacaramanii hojjetanii qabamanii reebamuu fi manneen hidhaa keessatti ugguramanii dararamaa kan jiran lakkoofsaan hedduu kan tahan yoo tahu qaama rakkoo isaanii furuuf yaalii godhes akka hin jirre waraabbiin sagalee mana hidhaa keessa taa’anii hidhamtootni karaalee miidiyaa hawaasaa lakkisan ni argisiisa.
NIIW YOORKI (VOA Afaan Oromoo) — Godaantonni Itoophiyaa Saawudi Arabiyaa Jidda, bakka tursiisaa Shumeeysii jedhamu…
"Miidhaa nu keessa jirru nama gabruma keessa jiruun takka..." baqattuu Oromoo Keniyaa
"Miidhaa nu keessa jirru nama gabruma keessa jiruun takka..." baqattuu Oromoo Keniyaa Rakkoo jabuutii keesaa…
June 09, 2018 ONN: Tuutni Beektotaa fi Gaazzexeessitoota Oromoo Magaalaa Asmaraatti Konfaransii Imaammata ABO irra…
Aba Solan: Jaal Waaqomsa Guutuu! I just finished listening to your interview with Oromo National media! Privileged and honored to call myself…